Maxaa loo baahan yahay inay dhacaan si Manchester City ay ugu ku guuleysato horyaalka Premier League? | Gooldhalin
Maxaa loo baahan yahay inay dhacaan si Manchester City ay ugu ku guuleysato horyaalka Premier League?
Guushii Manchester City ee ay ka gaartay Stoke habeenkii isniinta ayaa rajo laga qabaa inay ku guuleysato horyaalka Premier League hadii ay guuleystaan kulamada Evertoon iyo United.
Ciyaaryahanka David Silva ayaa City ka caawiyay inay 2-0 kaga badiyaan Potteries, waxaana ay hada 16 dhibcood ay ka sareeyaan koxda ay xifaaltamaan ee Manchester United
Ciyaaryahanada City ayaa haatan u duuley Abu Dhabi si ay haalkaas ugu soo qaataan tababarka cimilada kulul ee kubada cagta iyadoo la rajeynayo inay ku dhowaadaan seddex isbuuc halkaas ku maqnaadaan,maadaama ay ka maqan yihiin FA Cup oo tadobaadka dambe la ciyaari doono.
Manchester City Waxay dib ugu soo laaban doontaan kulanka ay la ciyaareyso kooxda Everton kaasoo ka dhici doonaa garoonka Goodison Park 31ka March,ka hor inta aysan United kula ciyaarin Etihad Isbuuc ka dib.
Red Devils ayaa marti gelineysa Swansea marka ay ku soo laabato Premier League dhamaadka bishaan ka hor inta aysan u safrin Manchester City.
Iyadoo labada kooxood ay haatan u dhaxeyso 16 dhibcood, iyadoo sideed kulan ay ka harsan tahay horyaalka, City kuma guuleysan karto horyaalka ka hor inta aysan wajaheyn United.
Haddii ay garaacaan Everton oo United guuldaro ay ka soo gaartay Swansea City, waxay noqoneysaa farqiga dhibcaha 19 dhibcood 7 kulana ay ka harsan tahay Horyaalka.
Laakiin waxay u baahanan doontaa City kaliya dhibic kulanka ay la ciyaareyso kooxda ay xafiiltamaan ee United marka ay ku qaabilaan Etihad si ay ugu guuleystaan horyaalkii seddexaad ee Premier League.
Si kastaba ha noqotee – hadii City ay badiso labada kulan ee soo socota, waxaa ay ku guuleys doontaa Horyaalka.
Haddii City ay dhibcaha ka weyso kooxda lagu naaneyso Toffees, waxay noqon kartaa mid aad u adag inay ku guuleysato horyaalka.
GuushaUnited ay soo gaartay iyo guuldarada city ka soo gaarta Everton ayaa horyaalka xiiso u sii yeeleysa waxaana markaas farqiga u dhexeeya uu noqon doonaa 13 dhibcood, waxaana markaas city laga rabaa inay sameyso wax walbo ay ku guuleysan karto kadib kulanka United oo ay la ciyaari doonaan kooxda spurs.
Haddii City ay barbaro la gasho kooxda Sam Allardyce, United Iyana ay garaacday Swansea, farqiga u dhaxeeya wuxuu noqon doonaa 17 dhibcood ka hor derby Manchester, taasoo la micno ah United inay weli ku ay haysato fursad ay ku dagaalanto.
Sidaas darteed – hadii United ay garaacdo Swansea, City waa inay garaacdaa Everton si ay u sii noolaato rajada ay ka laheyd inay horyaalka ku guuleysato.